Ny jorery sy ny vitsika - Takila Malagasy
Ny jorery sy ny vitsika (Jean De La Fontaine)
Mpanoratra: Jean De La Fontaine
Nitsidika : 1632
Nosintomina tamin'ny La cigale et la fourmi nosoratan'i Jean De La Fontaine. Novaina ho azo tantaraina amin'ny ankizy.
Nanova azy Hery
Indray andro hono mpinamana be ny jorery sy ny vitsika. Mifanena matetika izy ireo satria ny vitsika dia mandalo matetika eo ambanin'ny hazo izay ipetrahan'ny jorery rehefa mihaza.
Mandritra ny andro maina mantsy dia fomban'ny vitsika ny mihaza, mitady izay hohaniny etsy sy eroa hotehirizina rehefa ratsy ny andro. Indray andro ary dia nahita sakafo goavana ny vitsika. Kely nefa izy ka tsy maintsy hiverimberenana ny fitaterana ny sakafo vao ho tonga any anaty lavaka. Dia nanomboka ny fitaterana ny sakafo izy, natao be fitaona ihany satria efa nandindona ho avy ny orana. Nony nandalo teo ambanin'ny hazo misy ny jorery izy dia nijanona kely naka aina. Henony tamin'izay ny hira milanto nataon'ny jorery avy ao anaty hazo. Tsikaritry ny jorery fa nihaino azy ny vitsika dia nijanona kely izy ka nanontany azy.
- Fa inona ity ataonao ry Vitsika?
- Miasa mitaona ny sakafoko ho any an-davaka aho ry Jorery. Midìna raha mba hanampy ahy ianao. Hoy ny vitsika namaly azy
- Hanky va re, hoy ny jorery. Izaho ity mbola mihira fa rehefa aho manampy anao. Henoy anie fa hanaovako hira iray ianao e! Sady niantsampy teo amin'ny rantsan-kazo izy dia nanomboka nihira.
- Mbola betsaka ny entana hotaomiko, hoy ny vitsika, fa aleo ary aloha aho handeha... saingy tsy henon'ilay jorery intsony izany fa efa revo nihira izy.
Niverina fanindroany ny vitsika dia mbola naheno ny jorery nihira mafy ihany. Tsy niraika intsony izy fa ny asany no notohizany.
Dia toa izany foana, fanintelony, faninefany. Tsy nijanona nihira ny jorery. Ny vitsika kosa tera-tsemboka izaitsizy niasa.
Nony efa kely sisa tsy ho voataona daholo ny sakafo dia nijanona kely naka aina teo ambodihazo nisy an'i Jorery indray i Vitsika izay efa torovana fatratra. Natrakany ny lohany ka niantso an'i Jorery izy.
- Dia tsy mba afaka hanampy ahy hitaona ireo kely sisa tsy vitako ireo ve ianao ry Jorery? Reraka fatratra aho nefa ny orana efa madiva hilatsaka.
- Tena vao mamerimberina hira iray mihitsy aho izao ry Vitsika, hoy i Jorery, ka raha vao midina eny aho dia adinoko ilay izy. Fa rehefa re aho manampy anao.
Naka aina fotoana vitsy i Vitsika dia nanoy ny diany.
Vao tapitra voataonan'i Vitsika tokoa ary ny sakafo dia nirotsaka be ny orana. Orana izany, tsy nitsahatra nandritra ny fotoana maharitra mandra-paharivan'ny andro. Nony nitsahatra ny orana vao tapa-kevitra hitady sakafo i Jorery. Inona intsony no teo! Maizin-kitroka tanteraka any ivelany sady feno rano. Ny tena anefa ity noana. Tsy hahavita handry tsy hihinana. Hany hery dia nidodododo nandondona tao an-davak'i Vitsika.
- Haody ry Vitsika. Efa matory angaha ianao?
- Tsy mbola matory aho, hoy i Vitsika fa mbola misakafo mihitsy izao.
- Eh! Sambatra lahy ianao. Hoy i Jorery. Izaho ity tsy nahita sakafo intsony fa efa maizina ny andro moa ny orana koa teo avy. Sao re mba misy azoko animbinana ao aminao fa ho noana aho raha hatory tsy hihinana?
- Izay ny anao, hoy i Vitsika. Maina ireny ny andro, tsy niasa ianao fa laozanao nihira. Hitanao aho nivingitra sakafo tsy nampianao akory. Izao ianao ity tsy manan-kohanina. Dia ahoana izany?
- Aza mandatsa re ry Vitsika, hoy i Jorery nitalaho. Raha mba misy ihany dia omeo fa ny amin'ny sisa no tsy hatao intsony.
Dia nomen'i Vitsika sakafo hono ny Jorery ary nafatrafarany mba handamina ny fotoana fiasàna sy fihiràna.
Izay hono no nahatonga ny jorery tsy mihira rehefa tsara ny andro fa amin'ny alina sy rehefa avy orana ihany izy no mihira.